Nitsofoka tampoka anelakela-trano ny polisy: 31 tratra tsy nanao arovava, mpivaro-toaka iray voasambotra | NewsMada
Nitsofoka tampoka anelakela-trano ny polisy: 31 tratra tsy nanao arovava, mpivaro-toaka iray voasambotra
Par Taratra sur 24/07/2020
Efa betsaka ihany ireo fanentanana natao fa mbola misy hatrany ireo tsy manaja ireo fepetra ao anatin’izao hamehana ara-pahasalamana izao. Anisan’izany ireto andian-jatovo mpijoro an-dalana sy mpivarotra toaka, etsy Ankadifotsy nosamborin’ny polisy, omaly, ireto.
Milamina ny lalana eto an-dRenivohitra rehefa tolakandro, saingy mifanohitra amin’izany kosa ny zava-misy any ana­ty tanàna sy elakela-tra­no. Na eo aza ny fanentanana tsy ankiato ombieny ombieny, misy hatrany ireo olona tsy manaja ny fepetra napetraky ny fanjakana.
Tsy nanampo ny fisiana po­lisy manao fanamiana sivily misafo ny elakela-tra­non’An­ka­difotsy ireo mponina mipetraka eny an-toerana, omaly ka tratra avokoa ireo andian-ja­to­vo mpijorojoro mameno ny la­lana sady tsy manao arovava.
Nentin’ny polisy avokoa ireo olona miisa 31 tratra tsy nanao arovava teny Ankadi­fo­tsy ireo.
Voasambotra ny tompon’ny ”bar” nosamborin’ny polisy koa ny vehivavy iray tompona ”bar” mpivoha maraina sy hariva, mampitangorona ireo mpisotro toaka eny an-toerana. Nangina tampoka ny tanàna taorian’ny nandraofan’ny polisy azy ireo. Nam­baran’ny polisy fa efa misy mihitsy ireo olona sasany mi­tily ireo polisy ka voa midina anaty elakela-trano ny polisy, mangina ny tanàna, saingy vao midify kely izy ireo dia manao ny fanaony avokoa ireo olona aorian’izay.
“Tsy sasatry ny mamerina hatrany izahay fa aza ny polisy no andrasantsika hanasazy vao ho tompon’andraikitra isika. Ilay valanaretina efa miparitaka eny anivon’ny fiarahamonina rehetra eny”, hoy ny fanazavan’ny polisy.